Saturday January 18, 2020 - 17:16:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu faahfaahiyey qaraxii xooganaa ee maanta ka dhacay halka loo yaqaano Boodboodka ee duleedka degmada Afgooye, halkaas oo lagu beegsaday shaqaale Turki ah iyo maleeshiyaat Soomaali ah oo ila
War kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu faahfaahiyey qaraxii xooganaa ee maanta ka dhacay halka loo yaqaano Boodboodka ee duleedka degmada Afgooye, halkaas oo lagu beegsaday shaqaale Turki ah iyo maleeshiyaat Soomaali ah oo ilaalo u ahaa.
Taliska ciidanka Al-Shabaab ayaa sheegay in naftii hure katirsan ciidanka Al-Shabaab uu gaari miineysan ku weeraray shaqaalaha Turkiga iyo ilaaladooda, islamarkaana halkaas uu ka dhashay khasaare xoogan.
Taliska ayaa sheegay in qaraxaas kadib ay xoogagoodu wadada u galeen gaari kale oo Cabdi Bile ah kaas oo dhanka Muqdisho usoo qaaday meydadkii iyo dadkii ku dhaawacmay qaraxii Boodboodka balse isagana xilli uu marayey agagaarka Siinka dheer lala helay qarax aad u xoogan oo miinooyinka dhulka lagu aaso ah, halkaas oo markale uu cadowga kasoo gaaray khasaare xoogan.
Warka kasoo baxay Xarakada Al-Shabaab waxaa lagu sheegay in weeraradaas shaqaalaha Turkiga looga dilay laba xubnood lagana dhaawacay ilaa 5 kale, halka maleeshiyaatka Soomaalidana laga dilay ilaa 4 askari, lagana dhaawacay illaa 9 kale.
Maleeshiyaatka ku dhaawacmay qaraxa waxaa ka mid ah nin magaciisa lagu soo koobay Fanax oo ahaa taliye ku xigeenka maleeshiyaatka loo yaqaano 'HARAMCAD' ee uu Turkigu soo tababaray sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee ka dhashay qaraxa waxaa jira burbur xooggan oo soo gaaray gawaaridii ay wateen shaqaalaha Turkiga iyo kuwii ay wateen ciidankii ilaalada ahaa.
Al-Shabaab waxay sheegtay inay goobta ku burburisay illaa 4 gaari oo ay ku jiraakuwo gaashaaman oo ay wateen ciidamada Turkiga.
Sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxu kadhacay ayaa muujinayay burbur xoogan oo soo gaaray gawaaridii ay wateen ciidanka ilaalada u ahaa shaqaalaha Turkiga.